Mma Armani na-ekwupụta ihu ịma mma ọhụrụ
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Mma Armani na-ekwupụta ihu ịma mma ọhụrụ
Mma Armani mara ọkwa onye omere America Tessa Thompson dị ka ihu kachasị ọhụrụ. Thompson ga-apụta na mkpọsa abụọ ahụ maka ntọala Luminous Silk Foundation na ike egbugbere ọnụ ọhụrụ, nke onye na-ese foto Swedish bụ Mikael Jansson gbara.
Luminous Silk Foundation amara na ọ bụ okwu izizi nke nkà ihe ọmụma Armani nke ime ka odidi ahụ zuo oke site na iji mmetụ dị mfe, na-abịa na nso nke gbara agba 40, dabara na ụda anụ ahụ ọ bụla. IKE egbugbere ọnụ bụ lipstick satin ogologo uwe nke ejiri mma nchebe, mmanu dị mma na pigmenti siri ike were wepụta agba mara mma na uwe ụbọchị niile, nkasi obi na mmetụta dị fechaa. Mgbọ mgbaba ọhụrụ ya na-enye ohere ngwa ngwa yana ahịrị akọwapụtara nke ọma.
"Echiche m maka ịma mma na-emetụta nwanyị ọ bụla ka ọ na-eme ka àgwà ya na ihe dị iche iche dịkwuo mma. Tessa Thompson ji ike na-egbuke egbuke nke ọ na-ekupụta kpagburu m, ịdị jụụ nke ụzọ ya. Obi dị m ụtọ na mụ na ya na-arụkọ ọrụ ma kwupụta akụkụ ọhụrụ nke kaleidoscope nwanyị nke ịma mma Armani", Giorgio Armani kwuru.
Tessa Thompson kwukwara, sị: “Echiche anyị gbasara ihe mara mma, n'ọdịbendị, na-agbanwe ma na-esonyekwu. Ihe m hụrụ n'anya maka Armani bụ ụzọ ọ na-esi enye ụdị nwanyị ọ bụla ike inwe mmetụta kacha mma. "
Thompson, onye amụrụ na Los Angeles, malitere na ihe nkiri wee nwee obere ọrụ na telivishọn tupu o guzobe aha ya na fim. Ọrụ izizi ya ama ama, ihe nkiri breakout bụ “Ezigbo Ndị ọcha” na 2014, wee soro ihe nkiri Ava DuVernay nke 2014 bụ “Selma”. A makwaara Thompson maka ọrụ ya na usoro ihe nkiri Emmy họpụtara "Westworld". Na 2015, Thompson gbara egwu na "Creed" wee kwughachi ọrụ ya na "Creed II" na Nọvemba 2018. Thompson nọ ugbu a na mmepụta nke Creed III. Thompson gbara Valkyrie na ihe nkiri Marvel "Thor: Ragnarok" na 2017, sochiri "Avengers: Endgame" na 2019, ma ga-eweghachi ọrụ ahụ na "Thor: Love and Thunder" na-abịa, nke edobere maka ntọhapụ na 2022. Na 2019, Thompson pụtara na mkpuchi akwụkwọ akụkọ TIME dị ka onye ndu nke ọgbọ na-abịa. N'afọ 2020, Thompson rụkọrọ ọrụ na "Ịhụnanya Sylvie", nke onye isi ya mekwara. Thompson enwetala otuto na nso nso a maka ọrụ ya dị ka Irene Redfield na ihe nkiri Rebecca Hall's 1920s set “Passing,” ewepụtara na Nọvemba 2021 na Netflix. Ihe nkiri a bụ mmegharị nke akwụkwọ akụkọ Harlem Renaissance nke Nella Larsen nke 1920 nke na-enyocha omume nke ịgafe agbụrụ. N'akụkụ ọrụ ime egwuregwu ya, na 2021, Thompson hiwere ụlọ ọrụ mmepụta nke ya, Viva Maude, nke ọ bịanyere aka na HBO/HBO Max nkwekọrịta mbụ, na-amalite site na akwụkwọ ahụ iji lelee mmegharị nke "Ndụ Nzuzo nke Ụmụ nwanyị Ụka" na " Onye Na-atụ Ụjọ Ọnwụ.” Na mgbakwunye, Thompson mepụtara ma ga-emepụta usoro docu-usoro maka Hulu nke isiokwu ya bụ "Okwu mgbagwoju anya," nke na-emepe ugbu a.
Tessa Thompson na-esonyere ịma mma Armani n'akụkụ ndị na-eme ihe nkiri Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani, na Greta Ferro; ndị na-eme ihe nkiri Ryan Reynolds, Jackson Yee, na Nicholas Hoult; na ụdị Barbara Palvin, Madisin Rian na Valentina Sampaio. Ihu ịma mma Armani ọ bụla, n'ụzọ pụrụ iche nke ha, na-etinye ọhụụ Giorgio Armani nke ịma mma.
Ọzọ na: Harlem | Renaissance
Onye ọchụnta ego China na Tonga na-akọ banyere ọnọdụ agwaetiti ahụ ugbu a
Ọnwụnwa ụlọ ọgwụ ọhụrụ na-enyocha mkpali ụbụrụ miri emi iji gwọọ Alzheimer
Mkpesa gọọmentị nke gọọmentị Ukraine na UNWTO niile…
PATA: Ras Al Khaima bụ akụkụ ọhụrụ nke Eshia…
Ihe ọhụrụ ndị America mere iji gaa Jamaica: Adam...
Usoro ọgwụgwọ ọrịa mbụ na-agbanwe maka ụdị ọrịa shuga 1
Fraport na TAV na-akwụ € 1.81 ijeri ego n'ihu maka ...
Kedu ihe bụ nhazi ọrụ nke Parabolic SAR?
Mmanụ a na-emegharị ọhụrụ Emere site na mmanụ esi nri ejiri